Emailka Fiidiyowga: Waa Waqtiga Iibku Uu Si Shaqsi Ah Ku Heli Karo | Martech Zone
Email-ka Fiidiyowga: Waa Waqtiga Iibku Uu Shaqsi Noqonaayo
Isniin, Maarso 23, 2020 Khamiista, Diseembar 30, 2021 Douglas Karr
Dhibaatada COVID-19, awoodda kooxaha iibka ee dibedda inay ilaashadaan xiriir shaqsiyeed rajadooda iyo macaamiishooda ayaa la ciribtiray habeenkii. Anigu waxaan aaminsanahay in isgacan qaadku uu cunsur muhiim u yahay geedi socodka iibka, gaar ahaan waxqabadyo waaweyn Dadku waa inay awood u yeeshaan inay midba midka kale indhaha ka eegaan oo uu akhriyo luuqada jirka si uu kalsooni ugu helo maalgashiga ay samaynayaan iyo lammaanaha ay xulanayaan.
Waxyaabaha lagu murmo, mustaqbalka dhaqaalaheena ayaa su’aal laga qabaa. Natiijo ahaan, kooxaha iibka ayaa ku dhibtoonaya inay xiraan heshiisyada… ama xitaa inay shirkadaha ka jawaabaan. Waxaan ka shaqeynayaa bilow hadda boqolaal kun oo doolar oo si adag ugu jiray dhuumaha… heshiiskiina ugu horeeyayna dib ayuu u riixay taariikhda. Marka la eego in aan ka caawinno shirkadaha xagga otomaatiga iyo is-dhexgalka, waa waqti adag tan iyo markaas waan ognahay inaan caawin karno.
Fiidiyowga loogu talagalay Istaraatijiyadaha Iibka
Taasi waxay tiri, waan fulinaynaa xal email video si looga caawiyo kooxahayaga iibinta hagaajinta la shaqeynta rajooyinka iyo macaamiisha si isku mid ah. Fiidiyowgu isuma barbar dhigo shaqsi ahaan, laakiin waxay bixisaa fursad soo jiidasho leh oo si shakhsi ah loola hadlo rajada ama macaamilka.
Fiidiyowga loogu talagalay goobaha iibka waxay leeyihiin astaamo guud:
Record - ku duub fiidiyowyo shakhsi ahaaneed adoo adeegsanaya desktop-ka, qalabka wax lagu beddelo, ama dalabka moobiilka.
Isdhexgalka CRM - ku qoro emaylka hoggaanka, xiriirka, koontada, fursadda, ama kiiska.
Enhancement - wax ka bedel fiidiyowyada oo ku dar dusha sare iyo miirayaasha.
qaylodhaan - la soco hawlgallada fiidiyowga waqtiga-dhabta ah oo aad hesho digniino.
Pages - degitaanka bogga soo-dhexgalka si aad u daawato ugana jawaabto fiidiyowga. Qaarkood xitaa waxay leeyihiin isdhexgal isku dhafan oo jadwalka ballamaha ah.
Warbixinta - ku cabir waxtarka Warbixinnada gaarka ah iyo Dashboorka.
Waa kuwan goobaha ugu caansan:
Bombbomb - Si dhakhso leh oo fudud u duub, u dir, oo ula soco emaylka fiidiyowga ah si aad ugu istaagto sanduuqaaga ', macaamiisha' iyo shaqaalaha.
Covideo - Duub oo dir fiidiyowyo shaqsiyeed oo hagaajinaya heerka jawaabaha, kordhinaya fursadaha iibka iyo xira heshiisyo badan
Dubb - Ku kobci meheraddaada bogag fiidiyoow ah oo ficil ah oo loo diri karo meel kasta oo leh aragtida GIF.
Loom - Diritaanka Gumeystayaashu waxay ka waxtar badan tahay garaacista emayllada dhaadheer ama maalintaada aad ku qaadanayso shirar aad ku yeelanaysid wada hadallo aan u baahnayn inay dhacaan waqtiga dhabta ah.
OneMob - Si dhakhso leh u abuur bogag ka kooban waxyaabaha ku jira Gasho rajooyinka, macaamiisha, wada-hawlgalayaasha iyo shaqaalaha
DULMARID - vidREACH waa emayl fiidiyow ah oo shakhsi ahaaneed iyo kaqeyb galka iibka kaas oo ka caawiya ganacsiyada inay ka qayb galaan dhagaystayaashooda, keenaan hogaamin badan iyo xiritaan heshiisyo badan
Video loogu talagalay Istaraatijiyadaha Iibka
Qof walba sanduuqa sanduuqiisa meel sare ayaa la soo tubay imika dadkuna waxay ku adag yihiin waqti ay ku shaandheeyaan waxyaabaha runti qiime u siin kara shaqadooda. Waa tan taladayda shaqsiyadeed ee ku saabsan u adeegsiga fiidiyaha iibka:
Line Subject - Dhig video khadadkaaga maadada leh qiimaha aad keentay.
Gaaban - Waqtiga dadka ha iska lumin. Ku celceli waxa aad dhihi doonto oo si toos ah u abaari barta.
Bixi Qiime - Waqtiyadan aan hubin, waxaad u baahan tahay inaad bixiso qiime. Haddii aad kaliya isku dayeyso inaad iibiso, waa lagaa indha-tirayaa.
Sii Gargaar - Waxaad fursad u siisaa rajadaada ama macmiilkaagu inuu dabagal ku sameeyo.
Qalabka - Adeegso kamarad wanaagsan iyo makarafoon. Haddii aadan haysan makarafoon wanaagsan, sameecadda dhagaha ayaa badanaa shaqeyn doonta.
Video Mobilo - Haddii aad wax ku duubato taleefanka gacanta, iskuday inaad wax ku duubato muuqaalka muuqaalka maaddaama dadku u furayaan tan e-maylkooda, oo ay u badan tahay in ay ku jiraan desktop haddii ay joogaan xafiiskooda gurigooda.
Dhar for Success - Dhidid iyo surwaal yoga ah ayaa laga yaabaa inay noqdaan dharka xafiisyada ugufiican guriga, laakiin si kalsooni looga muujiyo, waxaa la joogaa waqtigii la qubeysan lahaa, la xiiri lahaa, lana lebisan lahaa guusha. Waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento kalsooni badan qofka aad heysatana wuxuu heli doonaa aragti weyn sidoo kale.
Background - Ha istaagin derbi cad hortiisa. Xafiis leh xoogaa qoto dheer iyo midabbo diirran oo gadaashaada ah ayaa ka casuumaad badan.
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa isku xirka xiriiriyaha qaar ka mid ah qalabka ku jira maqaalkan.
Tags: Bombbombisdhexgalka crmmidmobvideo iibkavideo loogu talagalay dhufto ee iibkafiidiyowga ku jira emaylkaIs dhexgalka YouTube